Fanondranana olona an-tsokosoko mankany Chine: teratany sinoa 5 lahy nidoboka eny Tsiafahy | NewsMada
Fanondranana olona an-tsokosoko mankany Chine: teratany sinoa 5 lahy nidoboka eny Tsiafahy
Par Taratra sur 29/11/2018
Olona fito mianadahy (teratany sinoa ny 5, ary Malagasy ny roa) no voasambotry ny polisy, tany Ihosy sy tetsy Anosy, ny 22 sy 23 novambra lasa teo, noho ny resaka fanondranana olona an-tsokosoko mankany Chine. Naiditra am-ponja vonjimaika, any Tsiafahy, ireo sinoa dimy lahy sy malagasy iray, raha nidoboka eny Antanimora kosa ny ramatoa iray.
Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, afakomaly, ireo teratany sinoa dimy lahy miampy lehilahy teratany malagasy iray samy voarohirohy amina raharaha fanondranana tovovavy malagasy mankany Sina. Raha ny tatitra voaray avy amin’ny polisy, fito mianadahy ny olona indray voasambotra ny 22 sy 23 novambra 2018 lasa teo teny Anosy sy tany Ihosy noho ny resaka fanondranana an-tsokosoko olona mankany Sina. Ny 22 novambra 2018, nahazo loharanom-baovao ny polisy avy ao amin’ny « service des enquêtes specialisées » na SES Anosy fa misy teratany sinoa hanamboatra pasipaoro ho ana vehivavy telo ao amin’ny sampandraharaha misahana ny fanamboarana pasipaoro. Natao avy hatrany ny fitsirihana ka tratra teo am-pikarakarana izany antontan-taratasy izany ny teratany sinoa dimy niaraka tamin’ireo vehivavy telo hanamboarana pasipaoro. Nentina avy hatrany tao amin’ny polisin’ny SES nanaovana fanadihadiana ireto Sinoa tratra ireto. Nandritra ny fanadihadiana azy ireo no nahafantarana fa vao tonga ny 7 novambra 2018 ny telo amin’ireto teratany sinoa ireto ary nisora-panambadiana tamina vehivavy malagasy telo izy ireo ny 17 novambra 2018 teo tany Ihosy.
Efa mpivezivezy eto Madagasikara…
Nohamafisin’ny polisy hatrany fa efa mpivezivezy eto Madagasikara ny roa amin’ireto teratany sinoa ireto. Fantatra ihany koa fa tsy ampy taona fa namboarina sy nampiakarina ny taon’ny roa amin’ireo vehivavy nisora-panambadiana amin’ireo Sinoa ireo. Tompon’andraikitra tamin’izany ny lehilahy iray mpiasan’ny kaominina any Ihosy, raha ny fanazavan’ny polisy hatrany. Fantatra tamin’ny famotoran’ny polisy hatrany fa ilay lehilahy mpiasan’ny kaominina ihany no niaraka tamina ramatoa iray hafa nitady ireto tovovavy tsy ampy taona ireto hampanambadiana ireto Sinoa ireto. Voasambotry ny polisy tany Ihosy, ny 23 novambra 2018 lasa teo, izy ireo. Nambaran’ny tatitra avy amin’ny polisy fa tamin’ny fahatongavan’ireo Sinoa ireto tany Ihosy, miisa efatra ny tovovavy malagasy naterin’ilay ramatoa tao amin’ny hotely nivantanan’ireo Sinoa ireo. Nisy ny fifantenana ka ny telo no nety amin’ireto Sinoa lahy ireto. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotorana nataon’ny polisy ary niafara amin’ny fampidirana am-ponja eny Antanimora ilay ramatoa raha any amin’ny fonjaben’i Tsiafahy kosa ilay lehilahy iray miaraka amin’ireo teratany sinoa mpanao trafikana tovovavy malagasy mankany Sina.
Aiza ny lalàna mifehy ny fanaraha-maso itony teratany sinoa miditra sy mivoaka eto amintsika itony?